महिनामै अर्बौंको धान आयातः कृषि मन्त्री – NewsAgro.com
महिनामै अर्बौंको धान आयातः कृषि मन्त्री
June 29, 2015 June 29, 2015 newsagro0Comments agriculture कृषि, hariprasad parajuli, Nepal नेपाल, newsagro.com न्युज एग्रो डट कम, बिनिता बराल Binita baral
सन्दर्भ राष्ट्रिय धान दिवस
काठमाण्डौ, १४ असार । कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालका राइस मिलहरुको चर्को शुल्कको कारण चामल आयात बढेको विश्लेषण गरेका छन् । तराइका मिलहरुले धान कुटेको शुल्क निकै बढि लिने गरेको कारण सीमा क्षेत्रका किसानहरु भारतकै मिलमा पुग्ने हुँदा आयात बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘खासमा हामीलाई १४ अर्ब रुपैंयाँको धान मात्र अपुग भएको हो,’ उनले भने । हाल नेपालमा वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी रुपैंयाँको धान आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना) ले राष्ट्रिय धान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको धानमा आत्मनिर्भर कहिले ? बिषयक कृषि सम्बादमा बोल्दै कृषिमन्त्री पराजुलीले सोमबार यस्तो बताएका हुन् ।
सात वर्षअघि निर्यात हुने धान अहिले तीव्र रुपमा आयात बढिरहेको छ । धान विज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्ने धानलाई सरकारी प्राथमिकता नपुगेको हुँदा यसको उत्पादन कम भएको बताउँछन् । विज्ञहरुले निकालेको प्रविधि आम किसानमाझ प्रसार नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जानेको, सिकेको प्रविधि दराजमै छ,’ उनले दुखेसो गरे । उनी लामो समय कृषि अनुसन्धान परिषदमा धान विज्ञको रुपमा कार्यरत थिए ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक युवराज पाण्डेले आफूहरुले सिफारिस गरेको प्रविधि किसानमाझ पुग्न नसक्नुमा नीतिगत चासोको कमी भएको बताए । ‘हाम्रो सिस्टमले किसानलाई बीऊ दिन पनि सक्दैनौं,’ कृषि मन्त्री पराजुलीतर्फ हेर्दै उनले भने । मौसम परिवर्तनको कारण धान उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको उनले बताए । खडेरी, अति वर्षा सहनसक्ने, हाइब्रिड धानजस्ता विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘तर, मेहनत ग¥यो, किसानलाई व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गराउन बीऊ दिन सक्दैनौं,’ उनले थपे ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जिसीले नेपालमा भोकमरी नभई भातमरी लागेको तर्क पेश गरे । ‘हाम्रो वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन ६६ लाख मेट्रिक टन छ, तर आवश्यकता ५२ लाख मेट्रिक टन मात्रै हो,’ उनले विश्लेषण सुनाए । नेपालीको खानेबानीमा परिवर्तन आएको, खस्रो, मोटो चामलको साटो मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढेको उनले बताए ।
हाल नेपालमा प्रति हेक्टर ३.२ टन धान उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले भने,’यसलाई बढाएर ३.५ प्रति हेक्टर मात्र गरेपनि धान आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । हामीले परिवर्तित आहार पद्धतिमुखी उत्पादन गर्नुपर्छ ।’
जमीन खण्डीकरणको कारण पनि धान उत्पादन कम भएको उनले बताए । भू उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाँचो उनले औंल्याए । त्यसो त, नेपालमा मल प्रयोग दर कमी, सिंचाइ अभावले पनि धान उत्पादन कम भएको उनले बताए । ‘३७६ कृषि सेवा केन्द्र र २० प्रतिशत सिंचाइ सुविधायुक्त जमीनबाट कसरी उच्च उत्पादन लिन सक्छौं ?,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
तर, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले भने बढिरहेको धान आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति तयार भएको बताए । धानमा आत्मनिर्भर कहिले ? विषयक अन्तरक्रियामा उनले जवाफ दिँदै भने आगामी तिन वर्षभित्र । राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानद्धारा सोमवार कृषि उपभोक्ता डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुनाए ।
उनले सुनाएको आगामी रणनीतिमा कृषि मन्त्री पराजुलीले अझ व्याख्या गरे । हामी आगामी तीन वर्षमा दूधमा, ५ वर्षमा मासुजन्य र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । ‘आगामी १० वर्षमा हामी पूर्ण रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछौं,’ उनले थपे । सोही अवसरमा नेपाली चलचित्रकी नायिका तथा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानको कृषि सद्भावना दूत बिनिता बरालको धान दिवसको अवसरमा धान रोपाईसम्बन्धि तयार पारिएको तस्विर कृषिमन्त्री पराजुलीले सार्वजनिकीकरण गरेका थिए ।
← चितवनमा करौडौं मूल्यमा गाई फार्म
बोटमै कुहिँदै आरुबखडा →
October 12, 2015 newsagro 0
'एक गाउ एक उत्पादन' मा ७२ करोड लगानी